မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး က အနိုင်ကျင့်နေပြန်ပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး က အနိုင်ကျင့်နေပြန်ပြီ။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး က အနိုင်ကျင့်နေပြန်ပြီ။
ဖုန်းဘီလ်စနစ်မှ ငွေဖြည့်ကဒ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းဖုန်းကဒ်အချို့၏ ညဘက် (၁၁) နာရီ ကျော် ဖုန်းခေါ်ဆိုခမှာ (၂၅)ကျပ ်မဟုတ်ပဲ ကျပ်ငွေ (၅၀)အပြည့် ပေးဆောင်နေရတယ်လို့သုံးစွဲသူများထံက သိရှိရကြောင်း သတင်းများထွက်နေပါတယ်။
အရင်တစ်ခါကလည်း MISS CALL ကိုငွေကျပ် (၃၀၀) ဖြတ်တာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။
အမှားကိုဝန်ခံတောင်းပန်တာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။အခုလည်း သတင်းစာကနေ တရားဝင်မရှင်းသေးဘူး။
GSM ဖုန်းတွေ အင်တာနက်သုံးလို ့ရအောင် (၁၀၀၀၀)ကျပ် သွင်းရတယ်။
တစ်ချို ့ဆိုင်က (၁၇၀၀၀)ကျပ်ပေးရတယ်။နေ ့ချင်းလိုင်းဖွင့်ပေးတယ်။
၂သိန်းတန် GSM ဖုန်းတွေ က 3G ရပြီး၊ ဝ၉-၅၀—— နဲ ့အရင် GSM ဖုန်းတွေ က 3G မရဘူး။
လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။အစကတည်းက လုပ်ပေးနိုင်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက လုပ်ပေးရမှာ နည်းပညာမလွယ်လို ့လား။
အနိုင်ကျင့်လို ့ရတယ် ဆိုတဲ့ သဘောလား။
ပြောမှ၊ တောင်းဆိုမှ၊ ဆန္ဒပြမှ၊ သမ္မတကြီးဆီစာရေးတင်မှလုပ်ပေးမှာလား။
လုပ်ပေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့လုပ်မပေးတာဆိုရင်တော့
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ “ ခေါင် ” ကိုလည်းအနားပေးပြီး
ငွေ ့ဖြည့်ကဒ်စနစ်ကို ပြောင်းတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။အဲ့(၁၅)သိန်းဖုန်းတွေမှာ ကဒ်စနစ်ပြောင်း၊
မပြောင်း မက်ဆေ့ချ်ပို ့ပါတယ်။ပြောင်းလိုတယ်ဆိုရင် လက်ကျန်ငွေ ဘယ်လို ရှင်းမလဲတော့
မသိပါ။အရင်ဆုံး ငွေ တစ်ထောင်ဆိုပြီး ဖုန်းထဲထည့်ပေးထားတယ်။ငွေ (၁၀၀၀၀)ကဒ်စထည့်
ရင် အဲ့ကနေ စဖြတ်ပါပီ။အရင်ကတည်းက ဘီလ်အရှုပ်တွေနဲ ့မို ့ပြဿနာက မသေး သေးပါဘူး။
နှစ်သိန်းတန်တောင် မကိုင်နိုင်သေးလို့ ..
ဖုန်းအကြောင်း မသိပါဘူးဗျာ …
သို့ပေသိ အထက်က အတိုင်းဆို ..
အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်ပေးတဲ့ ကိစ္စကြီးက မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တယ် ..
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လာဘ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို
၁၀၀၀ဝ နဲ့ ၁၇၀၀ဝ ဆိုတဲ့ ကွာခြားချက်က ပြနေတယ် ထင်တာပဲ …
Top up စနစ်ပြောင်းလိုက်တဲ ့ဖုန်းတွေ အရင် တုန်းက ကျန်ခဲ ့တဲ ့ငွေတွေ အတွက်
လည်း ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းသွားပြီး စာတင်ရတယ်၊ ၁ သိန်းကျော်ရင် ငွေသားထုတ်လို ့ရတယ်
၁ သိန်းအောက်ဆို Top up ထဲ ထည့်ပေးတယ် ၊ ချက်ချင်းတော့မထည့်ပေးဘူး၊
ငွေသားထုတ်လို ့ရတဲ့လူလည်းချက်ချင်းထုတ်လို ့မရသေးဘူး၊ စာတင်ထားရတယ်
လျှောက်လွှာခလည်း ယူတယ်၊ မိတ်တူလည်းဆွဲရတယ်၊ message ပို ့ပြီး ငွေတွေအကုန်
top up ထဲထည့်ပေးလိုက်ရင် ပြီးရော ကို ၊ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်မရှိမှာစိုးလို ့ကြံဖန်
ပြီး ကြိုးနီစနစ်တွေလုပ်နေတယ်၊ သွားထုတ်ရကောင်းမှန်း မသိရင် ဒိုင်စားအုန်းမယ်
@!#!#$!^&* ပြည်သူတွေပေါ်စေတနာမဲ ့ပုံကတော့ လိုက်လို ့ကိုမမှီဘူး
ည (၁၁းဝ၀)ကို တစ်မိနစ် ၂၅ မိနစ်ပဲ ကျမယ်ထင်ပြီး ဆက်မိတာ..ကုန်ပါရောလား မထူးပါဘူး တစ်မိနစ် ၅ဝ နဲ့ပဲ ဖြတ်တာပါပဲ
သံတွဲ မြို့မှာတော့ အင်တာ နက်လိုင်း လျှောက်ရင် ၁၃၀၀ဝ ပေးရတယ် တပတ်ကျော်လောက်တော့ကြာတယ်
ဒီလူ ကိုကြည့်နေတာ ကြာပီ။ကိုဂွတို က သံတွဲသားဘဲ။အော်—–ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လွယ်နေတာကို ခက်အောင်လဲလုပ်တတ်ကြတယ် ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ သဘာဝပဲ…….. (စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်း)
ငွေ တစ်သောင်းဖိုး ထည့်စမ်းကြည့်မိပါတယ်…
ထညက်ခဲ ခွေးယက် ခံရသလို ပြိုက်ကနဲ ပါသွားတော့တာ…
ခုတော့ သတိထားပြီး တွက်ချက်ကြည့်နေတယ်…
ဒါလဲ မထူးပါဘူး…. ဖုန်း ဘေလ်က မတ်တူး ထက်ပိုစားသဗျို့…။
Message ပို ့တာနဲ ့ပတ်သက်ပြီးပြောရအုံးမယ်။
Message တစ်ခါပို ့ရင် (၂၅)ကျပ်လို့အားလုံးသိထားကြတယ်။
Message တစ်ခါပို ့ရင် ယူတဲ့နှုန်းက မတူဘူး။
ကိုယ်ကလည်းမယုံတာနဲ့စာနှစ်ကြောင်းရိုက်ပြီးစမ်းပို ့လိုက်တာ
(၃၅) ကျပ် အဖြတ်ခံရတယ်။ အခုပဲစမ်းလိုက်တာနော်။
၀၉-၅၀—– ရဲ့ အင်တာနက်သုံးပြီး ရွာထဲဝင်မလို့ရွာကိုသွားတာ
ခရီးစရိတ်သာကုန်သွားတယ်၊ ရွာထဲဝင်လို ့မရဘူး။
တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေဆီက ငွေကြေးဓနတွေကို နေ ့ရောညပါ
၂၄ နာရီခိုးနေတဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးသူခိုးတွေကို နိုင်ငံတော်က ထိုင်ကြည့်နေတော့မှာလား။
တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ အတွက် လွှတ်တော်က
တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဖုန်းခနဲ့တင် ငါလေ …. တော့မယ်…..ဟဲဟဲ
ပြောရလျှင် အောင်မင်းလွန်ရာကျတော့မယ်ဗျာ ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိပဲ ၊ အမျိုးမျိုးလုပ်နေတော့ ၊ကျွန်တော်တို့လို ပြည်သူတွေ ၊ ပိုက်ဆံအလဟသကုန်တော့တာပေါ့ ။
missed call လိုမျိုးကို ပိုက်ဆံဖြတ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ ။ နောက်ပိုင်း အသံတွေထွက်လာမှ ငြိမ်သွားတာ ။
လူကြီးမင်းတို့ရေ စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါ ခင်ဗျ ။ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ
ကျွန်တော်ကတော့ လောလောဆယ် 5000 တန် PrepaidCard လေးတွေ ဖန်တီးပေးစေချင်တယ်ဗျာ
လောလောဆယ်တော့လိုင်းက အိမ်သာထဲကပြောလည်းရနေတယ် သို့သော်အင်တာနက်ကတော့ တော်တော်
ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေ ဖြည့်ပြီးရေးပေးကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးနဲ ့
နောက်ကိုယ်တွေ ့တစ်ခုက ဝ၉-၉၉—— ကနေ GSM or WCDMA ကိုပြောင်းပေးတဲ့ကိစ္စပဲ။
မပါရင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းကိုငွေပေးရင်ပြောင်းလို ့ရတယ်။
ပြောင်းခွင့်ရတာနဲ့ငွေစာရင်းဌာနမှာကြွေးကျန်ရှိမရှိစစ်ရသေးတယ်။
ကြွေးကျန်ကင်းမှ ပြောင်းဖို ့ဆက်လုပ်ရတယ်။
ဖုန်းရပြီး တစ်လကျော်လောက်မှာ ဖုန်းပိတ်ခံရတယ်။ကြွေးကျန်ရှိလို ့တဲ့။
ဖုန်းပိတ်ခံရတဲ့ အဆင့်ထိအမရောက်အောင် ဆောင်ရွက်လို ့ရတဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလား။
သုံးနေတဲ့သူတွေကို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ ဆက်သွယ်ရေးကလုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဆိုတာ အနိုင်ကျင့်တာပဲ။
ထပ်ပြောရပြန်ပါပြီ။ ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းကတော့ အဆင်မပြေမှုတွေတော်တော်များနေပါတယ်။ ဘယ်တော့များမှအဆင်ပြေကြရပါ့မလဲ။ သူများနိုင်ငံမှာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ်ပဏီတွေကပဲလုပ်နေတာပါ။ အစဉ်ကိုပြေလို့။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက ပုဂ္ဂလိက ကုမ်ပဏီတွေလောက်တောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ရင် ဘာလုပ်တော့မှာလဲ။ လုပ်နိုင်သူတွေလုပ်လို့ရအောင် ထွက်ပေးလိုက်ကြပါလား။ အရှက်ရှိကြပါလို့။
လာဘ်ကြိုက်တဲ့လူတွေ လာဘ်သီးယူမလား လာဘ်ဝါးယူမလားမေးရမယ်
အဲ့ဒါမှ ကြိုက်တာနဲ့ ရှင်းပေးလို့ရမှာ ဘယ်ဌာနက ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
တို့ကတော့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းလာမှပဲ ကိုင်တော့မယ် အခုတော့ ကိုင်နိုင်သေးဘူး
အဲလိုတွေ ပြောကျတော့ ပြောစရာလည်း ရှိသေးတယ်
1876 ကို ဆက်ရင် ၁ မိနစ် ၃ဝ ပဲဖြတ်တယ်
ဖုန်းခဏလေး ကိုင်ထားနော်.. ပြောမယ်ဆိုပြီး..
နာ့မှာတော့ ဖုန်းလေးကိုင်ပြီး ထိုင်စောင့်လို့
နောက်ဆုံးတော့ ဖုန်းလေးချပြီး သူငယ်ချင်းကို လှမ်းမေးမှပဲ ok သွားတော့တယ်
ဝင်ငွေများများရအောင်အချိန်ဆွဲပြီး ကြာကြာပြောဖို့သင်ထားပေးဟန်ရှိတယ်။
မဆီမဆိုင် ဘာဖုန်းသုံးတာလဲ။ ဘာတံဆိပ်လဲ။ ဘာအကြိုက်ဆုံးလဲ။ အဆင်ပြေလား။
အတွေ ့အကြုံရအောင် ဆက်ကြည့်လိုက်ပါလား။
“အရင်တစ်ခါကလည်း MISS CALL ကိုငွေကျပ် (၃၀၀) ဖြတ်တာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။”
အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ ကားစီးတိုက်ဆောက်နေကြတာထင်တယ် :-)
“မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ “ ခေါင် ” ကိုလည်းအနားပေးပြီး
ဟုတ်ပါ့ မလုပ်နိုင်ရင် ထုတ်ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ အလကား ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခပေးနေတယ်။ ဖုန်း မကောင်းလို့ အင်တာနက်ကောကောင်းလားဆိုတော့ အင်တာနက်ကလဲ အစုတ်။
စကားမစပ် အာဇာနည်နေ့က ၈မိုင် ဆက်သွယ်ရေးရုံးချုပ်က အလံက တိုင်တဝက်လဲမဟုတ်ဘူး။ တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာ။ ဆက်သွယ်ရေးက ဆက်သွယ်ရေးမှာတင် အသုံးမကျတာမဟုတ်ဘူး တခြား ကိစ္စတွေမှာ လဲသုံးစားလို့မရဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ (ကျွန်တော်က အာဇာနည်နေ့ ဆိုရင် အလံတွေကို သတိထားကြည့်ဖြစ်တယ်)
ဘယ်အချိန်ပြန်တွေးတွေး အေသင်ချိုဆွေပါပဲဗျာ ဒီမှာတင်းတယ် တင်းတယ် တင်းတယ် တင်းတယ်ဟေ့
အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတာ ခဏထားလိုက် အခု နှစ်သိန်းတန် GSM တွေ ကို လိုင်းကောင်းကောင်းမိအောင် လုပ်ပေးကြပါအုံး အခုဆို ဖုန်းတစ်ခါဆက်ရင် အရူးကြီးကျနေတာပဲ ဟိုးဘက်ပြေးလိုက် ဒီဘက်ပြေးလိုက်နဲ့ လိုင်းမိအောင်လိုက်ဖမ်းနေရတယ် မိပြန်တော့လည်း သူအသံကိုယ်မကြားကိုယ်အသံသူမကြားနဲ့ လိပ်ခေါင်းထွက်တော့မယ်
ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ သတင်းတွေကတော့ မွှေးနေတာပါပဲ ။
အထူးသဖြင့် ဖုန်းဘေလ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ၊ ပရီပတ်ဒ်ကဒ်ပြောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေ ၊ ဆယ်လူလာကနေ စီဒီအမ်အေတွေကိုပြောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အသံဗလံလေးတွေထွက်လာတာတွေ့ရတယ် ။
ဖုန်းဘေလ်တွေကိစ္စတုန်းကတော့ ဒီတေးလ်စစ်ကြည့်တော့မှ လျောချသွားတဲ့ အဖြစ်တွေအများကြီးပဲ …….. ။
စေတနာလေးထားပြီး အလုပ်လုပ်လျှင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ့် လုပ်ငန်းမျိုးပါ ။